Dlanini Masoka Kobola! - Afropolitan Explosiv
Dlanini Masoka Kobola!
October 14, 2014 afropolitanexplosiv Uncategorized 0
Image by Tshepo Phologane, Courtesy of 1stborn.Photography
Ibhalwe nguMbuso Ngcongco
Ngenyanga kaNhlangulana ngo1959 imbokodo yabamba inhlabaluhide yabhekis’ amabombo emabhaleni lapho uhulumeni wobandlululo wayethengisela khona amadoda umqombothi nobhiya.
Ukuphisa utshwala kwabe kuyindlela yokwakha umnotho nokuziphilisa kwabesimame ababevile enkulungwaneni.
Nangaphezu kwalokho, abaningi base beyibona imiphumela emibi yamankwebevu lapho amadoda ayengasabuyi namali, ephenduka izidakwa. Amaningi ayesaphelelwa nayimisebenzi, abesimame bengasathokozi ekamelweni okungamadojeyana sekuyethile, kuyizinothongwane. Kanti nezinga lobufebe lase lidla lubi, ucansi selutholakala bhusende, abantu bexegelwa yizimilo.
Bachitheka bugayiwe imbokodo isifike qathatha emabhaleni anjengo lihoho no mazithanqaze ngasesibhedlela esikhulu setheku i king edward.
Namhlanje kuyo le ephezulu, sibungaza usuku lokuqala kwaZulu kwavuleleka ukuthenga ngamasonto emabhodlela sitolo.
Lokhu kwenzeka nje isimame sibukha ngamabhakede, sibuya ngokuzolala – sibuya ngomso!
Ufica isimame sisihle siqedile sibuhlalele sibuhlehlisa size setshise ngogwayi ko Florida Road. Sisho nokusho ukuthi sona si ‘independent.
Baningi bazele abangazazi ukuthi ngezakobani izibongo izingane zabo. Kwazise phela okungabafana kulithanda kabi ikhekhe lezehla. Kulidla bukhoma kulikhume mpumpununu qede kulichamele ebese kulala ngekhona.
Uzothi weban asabelephi? Usuyophepha uma kukhona olinganwa yibhantshi aligqoke.
Utshwala lobu abunantanga webangani, budla fumuka budle silaza! Baguqis’ ijaji elikhulu uMatata, baye bakhothamis’ ungqongqoshe wezempilo uManto!
Kwabesimame kuyevelela ngoba usala nongiyosh’ ekhaya, oyokhula engundingasithebeni.
Namhlanje nje baningi abalale bebaliwe yiMetro police njengoba bekuneMetro Awards.
Abanye amehlo avaleke kwi-after party, ubona ngamunye eyothenga ama-morning after uzifundele kwezakho.
Abanye ubuqhufuqhufu izimoto ziqabula izihlahla, amalobhothi kanye nonesi ecaleni komgwaqo.
Wo hhe, dlanini masoka kobola!
uMbuso Ngcongco lona yinsizwa ezithandelayo ukucabanga nje ngendlela ehlukile, kodwa enemqondo.He writes on his personal capacity.